Maxay Tahay Sababta Aad Uxulayso? - Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga ISD 834
8,400 sababood oo loo jeclaado dugsiyadeena!
Waxaa jira sababo badan oo loo jeclaado Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga. Qiyaastii 8,400 oo iyaga ka mid ah inay sax ahaadaan! Ardaydeenu waa cajiib. Shaqaaluhuna sidoo kale waa!
Waxaan nahay degmada dugsiga ugu da'da weyn gobolka, laakiin taasi micnaheedu maahan inaan wali nahay degmada iskuulka ayeeyadiina. Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga waxaa lagu yaqaan hal-abuur. Aqoonyahankeennu waa kuwa ugu sarreeya, sida natiijooyinka imtixaankeennu muujinayaan. Laakiin waa sida aan daryeelayno ardaydeena taas oo keenaysa farqiga ugu weyn. Waxaa naloo aqoonsan yahay guud ahaan gobolka iyo qarankaba inaan marwalba caruurta ka hormarino anagoo ka caawinayna inay dhisaan maskax adag, jir adag iyo dabeecad adag. Waxaa naga go'an inaan siino jawi ilmo kasta uu dareemo inuu arko, la maqlo lana ixtiraamo.
Ku soo wareeji Dugsiyadeenna
Booqo dugsiyadeenna gebi ahaanba!
Guji magaca dugsiga hoose si aad ula kulanto maamulaha oo aad wax uga ogaato dugsiga.
Dugsiyada Hoose (Fasallada preK-5)
Amigos Unidos Labada Luuqad Isbaanishka
Dugsiyada Dhexe (Fasalada 6-8)
Bal U fiirso Naftaada Maxaa Nooga Duwan!
Taariikh dheer oo heer sare ah
Dugsiga koowaad ee degmada Minnesota
Casaan & Madow: Dhaqan Faan
Faras: Maskaxda-Masruufka Mid Ka Mid Ah
Dugsigii ugu horreeyay waxaa laga dhisay Stillwater sanadkii 1848. Stillwater wuxuu noqday degmadii ugu horreysay ee dugsi Minnesota - Degmo 1 - 1850. Dugsiga Sare ee Stillwater waxaa la dhisay 1873, Lincoln School, Waqooyiga 2nd Street iyo Laurel Street. Fasalkii ugu horreeyay ee ka qalin-jabiya Dugsiga Sare ee Stillwater wuxuu aqbalay dibloomaasiyo 1876 oo ay la qaateen 10 waayeel.
Waxa laga soo qaatay "Dugsiga Degmada 834 iyo Sannad-guuradii Labaad" oo la daabacay Abriil 1976.
"Marwo Marie Bolles waxay ka mid ahayd ardaydii ugu horreysay ee laga furay gurigii ugu horreeyay ee laga furay gobolka Minnesota - oo la dhisay sanadkii 1848. Dugsigani wuxuu ku yaallay Olive oo u dhexeeya Waddooyinka Labaad iyo Saddexaad. Wuxuu ahaa guri alwaax leh oo derbiyada ka kala jabaan. Waqtiga roobku da'ayo, malaas cusub (dhoobo) waa in gacanta lagu mariyo si looga ilaaliyo waxyaalaha ka soo baxa. Darbiyada waxaa lagu dhajiyay kuraas, ardayda waxay ahaayeen sagaal qof (tan ka hor ardaydu waxay ku kulmeen bakhaarka McKusick ee Main iyo Myrtle) 3R-na halkaas ayaa wax lagu baray, Miss Sarah Louise Judd ayaa ahayd macallinkii ugu horreeyay, Naxwaha sidoo kale wuxuu ka mid ahaa qodobbada ay ku adag tahay.
Mrs. Bolles waxay kici jirtay subaxa hore, waxay caano siin jirtay lo'da, waxay diyaarin jirtay quraac waxayna hagaajin jirtay jikada ka dib ka dibna waxay lugayn doontaa mayl daalan oo dhex mara kaynta mudada dheer si ay iskuulka u aado. Markii ay guriga timaaddo habeenkii waxaa jiray shaqo badan oo la qabtay.
Mrs. Marie Bolles, gabadha Mr iyo Mrs. Paul Carli waxay yimaadeen Stillwater 29-kii Juun, 1841. Mrs. Carli waxaa ka dhaadhiciyay walaalkeed aabe, Joseph R. Brown, oo ah aasaasaha Stillwater isla markaana hormuud ka ah Minnesota inuu yimaado Waqooyiga. Mrs. Bolles waxay jirtay 5 sano.
Sanadkii 1861 qaar ka mid ah ragga ku nool xaafada Stillwater ayaa ka jawaabey baaqii Madaxweyne Abraham Lincoln ee ahaa in la caawiyo Ururka isla markaana la aasaaso Shirkada B ee Ururka 1aad ee Gobolka Minnesota. Waxay ka soo dhaqaaqeen Stillwater ilaa Fort Snelling waxayna noqdeen halbeeg u adeegi jiray kala duwanaansho intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye. Markii nimankani ka tageen Stillwater, waxay soo xirteen funaanado dhogor guduudan iyo surwaal dhogor madow ah.
Guutada waxaa si fiican loogu yaqaanaa eedeyntii cusleyd ee dagaalkii Gettysburg halkaasoo ay ku soo gaareen khasaarooyin aad u badan. Waxaa lagu amray inay soo oogaan xaalad ay ka tiro badnaan doonaan ugu yaraan 5 illaa 1. Ujeeddada ayaa ahayd in waqti lagu iibsado nolosha dadka.
Lt. William Lochran, oo ah garyaqaan u dhashay Irish oo ka yimid magaalada St. Anthony, ayaa markii dambe qoray, "Nin walba wuxuu isla markiiba gartay waxa amarkaasi ka dhigan yahay - geeri ama nabarro dhammaanteen na soo gaadhay; allabarigii ciidanka si loo helo daqiiqado daqiiqado ah. oo badbaadi booska, iyo malaha goobta dagaalka. "
Ciidanku wuxuu si buuxda oo dhakhso leh ugu hoggaansamay amarka, isagoo la dhibtoonaya illaa 82% dhaawacyo soo gaara kuwii weerarka qaadayay; ficilkani wuxuu si weyn uga qayb qaatay ilaalinta meertada isfahamka midowga ee dhererka xabaalaha.
Markii la aasaasay Dugsiga Sare ee Stillwater, ardaydu waxay doorteen midabada iyo magaca kooxda "Casaan iyo Madow" si loo sharfo halyeeyadii sida geesinimada leh ugu soo halgamay qarankeenna. Midabbadayada iyo naanaysteenii hore waxay kudhisan yihiin isla weynaan, xamaasad, waxayna lahadlaan dhaqanka hodanka ah ee dugsigeena iyo bulshada.
In kasta oo aysan caddayn markii Dugsiga Sare ee Stillwater uu aasaasay naanaysta rasmiga ah, haddana waxay u badan tahay in naanaysyadu ahaayeen kuwo aan rasmi ahayn sababta oo ah Kabekonian, Stillwater Gazette, iyo Stillwater Arrow (wargeyskii hore ee dugsiga) ayaa naanaysta isku beddelay. Sannadihii hore, kooxda kubbadda cagta waxaa badanaa loogu yeeri jiray "Casaan iyo Madow." Waqti kadib kooxda waxaa badanaa loogu yeeri jiray "Croix" iyo "Prison City Eleven" ama "Warriors City Prison."
In kasta oo labadan hay'adood ee aasaasiga ahi ay jiraan, haddana magaca mustaqbalka ee dugsigu wuxuu dhashay muddo dheer ka hor intuusan magaca u bixin. Jimcihii, Nofeembar 5, 1926, Stillwater waxay u safartay Lexington Park ciyaar kubbadda cagta ah oo ka dhan ah St Paul Mechanic Arts. Markii ay siigadu degtay, kuwa yar yar ee xawaaraha badan ee Black iyo Red iyo Croix, waxay u ordeen sida "ponies". Intii lagu gudajiray labaatankii sano ee soosocda, saddexda naanays waxay wadaageen tooshka. Sanadkii 1945, kooxda kubbadda cagta waxaa loogu yeeri jiray Ponies halka dhammaan kooxaha kale ee isboortiga ay weli ahaayeen Croix. Si kastaba ha noqotee, 1946, Kabekonian wuxuu soo bandhigay sawir dhammaan afarta koox - kubbadda cagta, kubbadda koleyga, kubbadda koleyga, iyo orodka - oo loogu talagalay Ponies.
Kaliya kuma xirnaansheena naaneysku mid gaar ah laakiin astaanteena iskuulku waa mid nooc ah sidoo kale. Astaanta waxaa sameeyay Pony alum Paul Strohbehn (Fasalka 1974). Freshman ahaan, Strohbehn wuxuu ku guuleystey tartan fasalka farshaxanka ah ee Stillwater Junior High. Fasalka waxaa baray Steve Forseth sidoo kale kubbadda cagta iyo tababaraha orodka.
Pony wuxuu noqday go'aankii kooxda kubada cagta ee 1971, ka dibna dugsiga sare ayaa sidoo kale bilaabay inuu isticmaalo astaanta. Degmo dugsiyeedku waxay u qaateen Pony inay tahay astaanteeda rasmiga ah 2014. Inta aan ognahay, waxaan nahay iskuulka keliya ee adduunka ka jira ee adeegsada astaantaan.
Soodejiso Calaamada Fardo
Hoos waxaa ku yaal naqshadaha degmadu ansixisay ee astaanta dusha Dugsiyada Dadweynaha ee Stillwater iyo qoraalka "Dugsiyada Dadweynaha ee Aagga Biyaha". Haddii shaqsi ama urur uu raadinayo nooc kale oo fayl ah (sida .ai ama .eps), fadlan emayl ugu soo qor Jennifer Paulson paulsonj@stillwaterschools.org .
Astaantan looma adeegsan karo ama lama beddeli karo si kasta oo looma isticmaali karo kaalin ahaan ama kor u qaadis iyada oo aan laga helin oggolaanshaha degmada dugsiga.
Faras Dheer oo Qoraal leh - Midab Buuxa (png)
Faras Dheer oo Qoraal ah - Madow & Caddaan (png)
Faras Horizontal oo leh Qoraal - Midab Buuxa (png)
Faras Horizontal ah oo leh Qoraal - Madow & Caddaan (png)
Faras Dheer - Midab Buuxda (png)
Faras Dheer - Madow & Caddaan (png)
Ma u Baahan Tahay Inaad Ku Qanciso Inbadan?
Khibradaha Nolosha dhabta ah
Barashadu waa mid aad u mashquul badan markay khusayso nolosha dhabta ah. Taasi waa sababta aan ugu dareyno waxyaabaha sida robotikada iyo codeynta dugsiyadeena hoose, oo aan ku martiqaadno khabiirada bulshada inay ka garab shaqeeyaan ardayda dhigata dugsiyadeena dhexe iyo sare
Waxaan baranay ardayda xoogooda, xiisaha iyo qaababka waxbarashadooda. Macallimiintu waxay kala soocaan manhajka si ay ula kulmaan baahiyaha gaarka ah ee ardaydooda. Waxqabadyo kala duwan iyo kobcin ayaa gacan ka geysanaya ka-qaybgalka, dhiirrigelinta iyo caqabadda ardayda.
Waan ognahay in caruurtu sida ugu fiican wax u qabtaan markay dareemaan amaan, daryeel iyo taageerid, taas ayaa ah sababta shaqaalaheennu ugu shaqeeyaan si adag sidii ay xiriir ula yeelan lahaayeen ardayda, oo ay ula xiriiri lahaayeen carruurta asxaabtooda.
Waxaan danaynaynaa cunugga oo dhan!